Tusiyaha Xawaaraha Xajmiga - Faaiido Badan Oo Cusub Oo vfxAlert Cusub ah | vfxAlert official blog
«Speedometer» tilmaame - faa iido badan oo leh vfxAlert cusub
Si loo fahmo sida calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeeyaan , kuwa bilowga ahi waxay tilmaamayaal badan ku muujinayaan jaantuska, gadaashiisana aysan arki karin halka qiimaha u socdo, halkaasoo ay heshiis ka furan karaan ama seegi karaan calaamadda. Dhibaatooyinku way sii kordhaan marka go'aannada loo baahan yahay in dhakhso loo gaadho. Waa suurtagal in khaladaad lagu sameeyo khadadka tilmaamaha xitaa haddii ay muujiyaan heshiiska saxda ah. Waxaa jira qaab muuqaal ah oo si dhakhso leh loogu qiimeeyo xaaladda - tilmaame "Speedometer" ee nooca cusub ee vfxAlert . Aan aragno sida ay ugu shaqeyso cryptocurrencies.
Waxaa loo xisaabiyaa sida celceliska qiimaha afar lacagood: Bitcoin, Ethereum, Litecion, iyo ZCash. Marka, saadaalinta mala awaalka ah waa “la sifeeyay” waxaana la sameyn karaa saadaalino la isku halleyn karo.
Mabda'a xisaabinta wuxuu la mid yahay indices stock (Dow Jones, S&P 500). Haddii xigashooyinka hantida ay kor ugu kacaan heerka kor u kaca, ku dhaca isbeddel hoos u dhaca.
Tilmaamuhu wuxuu muujinayaa macluumaadka soo socda:
Intaa waxaa sii dheer, barta Binomo, waxaan ku darnaa tilmaame isbeddel ah jaantuska si muuqaal ahaan loo xaqiijiyo dib-u-dhaca suuqa:
Parabolic SAR. Go'aamiso jihada isbeddelka muddada-gaaban iyo muddada-dhexe. Dhibcaha tilmaamuhu way ka hooseeyaan qiimaha waana la hagaajiyay - waa kor u kac. Qiimayaal sare oo hoos loo jiheeyay - hoos u dhac.
Aynu u dhaqaaqno calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Halkan waa wax fudud:
K kac (Wicitaan) -xulasho . Dhammaan saddexda tilmaamuhu waxay ku jiraan aagga cagaaran, qiimaha ayaa ka sarreeya Parabolic SAR;
Dayrta (gelin) -option. Xaaladaha soo noqnoqda: Tilmaamayaasha ku jira SELL-zone, qiimaha ayaa ka hooseeya Parabolic-ka.
Fur heshiis shumaca xiga ka dib calaamadaha binary . Waqtiga dhicitaanka ee ikhtiyaariyada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 7-10 daqiiqo, xitaa haddii daqiiqad loo xusho waqtiga shaqada, sida fiidiyowgeena.
Calaamadda waxaa ku weynaaday isbeddello sarreeya iyo dhibcaha Pivot Points ee heerarka R2-3 ee BUY zone iyo S2-3 ee aagga SELL ee «Kooban»;
Tilmaamaha tilmaamaya aagga "Dhex-dhexaadnimada" wuxuu tilmaamayaa dhinac dhinac ah ama suuq aan degganeyn. Annagu ma fureyno meherado ama uma wareejineyno carqalad iyo istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh ;
Kuwa bilowga ah, waxay umuuqan kartaa kaliya Speedometer-ku inuu kufilan yahay, aaladaha kale looma baahna. Sedex tilmaame ayaa bixiya calaamado la isku halleyn karo, laakiin had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad raadiso xaqiijin dheeraad ah oo ka timaadda qaababka farsamada iyo laambadda. Way baajin karaan xitaa calaamad xoogan!
Haddii ganacsade ganacsade ah oo ganacsade ah uu suurtogal ka dhigo in la xiro ikhtiyaarka ka hor inta uusan dhicin, waan sameynaa (xitaa haddii faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadda ka soo horjeedda
Aan soo koobno . Isagoo ka fikiraya sida ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan , ganacsade waa inuusan iska indha tirin tilmaamayaasha sida "Speedometer". Iyaga adoo adeegsanaya, waxaad si dhakhso leh u qiimeyn kartaa suuqa, waxaad ku xaqiijin kartaa heshiiska si waafaqsan istiraatiijiyaddaada, waxaadna seegi kartaa calaamadda marka aysan caddayn in suuqa uu leexan doono iyo in kale.